बालबालिकामा वातावरणको असर::Hamrodamak.com
बालबालिकामा वातावरणको असर
बाबुआमाका नजरमा छोराछोरी बिग्रिए । सोचेअनुरूपको पढी दिएनन् । पढाइमा रुचि छैन । भनेको मान्दैन । शिक्षकका नजरमा विद्यार्थी बिग्रिए । अनुशासन छैन । नैतिकता छैन । राम्ररी पढेन । होहल्ला, डुलघुम र मोजमस्तीमा मात्रै भुलिए । आजको बुझाइ यही छ । विद्यालय छन् । शिक्षक छन् । विद्यार्थी पनि छन् । तर शिक्षा छैन । अभिभावक भन्छन् — शिक्षकले पढाएनन् । शिक्षक भन्छन् — अभिभावकले संस्कार दिएनन् । दुवैको पन्छिने कुरा । मारमा बालबालिका ।
बालबालिका आफैँ बिग्रिँदैनन् । बिग्रनु र सप्रनुको ज्ञान उनीहरूमा हुँदैन । उनीहरू सिक्छन् — जे देख्छन् । उनीहरू सिक्छन् — जे हामी गर्छौं । हामीले भनेका कुरा त राम्रा छन् । त्यो चाहिँ उनीहरूले सुनेको कुरा । हामीले गर्ने व्यवहार कस्तो छ ? त्यो उनीहरूले देखेको कुरा । हामीबाट उनीहरूले के पाएका छन् ? त्यो उनीहरूले भोगेको कुरा । मानव मस्तिष्कले सुनेको कुरा चाँडै बिर्सन्छ । देखेको कुरा अलि लामो समय सम्झन्छ । भोगेको कुरा चिरस्थायी हुन्छ ।
अभिभावकले आदेश सुनाउँछाँै । शिक्षकले आदर्श सुनाउँछौँ । पढाइका क्रममा हामी बालबालिकालाई सुनाइरहेका छौँ । पट्यारलाग्दा कुरा । व्यावहारिक छैन । कथाजस्तो ‘इन्ट्रेस्टिङ’ पनि छैन । विषयवस्तुलाई कथा बनाएर पढाऔँ । रुचि जाग्छ । बालबालिका भाषण सुन्न चाहँदैनन् । त्यसमा मज्जा छैन । विषयवस्तुलाई कथा बनाएर एक दिन पढाइ हेरौँ । त्यो दिन हाम्रा लागि शैक्षिक जीवनको अविस्मरणीय हुनेछ । सुन्न सक्ने समय कति हो ? कसैले दर्शन, विचार वा आदर्शका विषयमा दिएको भाषण सुन्ने क्षमता मानिसमा कति हुन्छ ? बढीमा १२ मिनेट वयस्कमा । सात मिनेट बालकमा । यसको अर्थ भाषण विधि काम लाग्दैन । शिक्षकले बुझ्नुपर्ने ।
हाम्रो समाज आदेशमुखी छ । सानालाई ठुलाले आदेश दिने । सानाले केही जानेको छैन । उसका सबै कुरा गलत । हाम्रा सबै कुरा ठिक । यही आदर्शले हामीलाई निर्देशित गरेको छ । यही आदर्शको अनुकरण हामी गर्छौं । केटाकेटीलाई ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गर्छौं । ऊबाट आफूलाई ‘तपाईं’ भनाउँछौँ । आफू सम्मान चाहने, अरूलाई सम्मान नगर्ने । ‘आफू सम्मान चाहनेले पहिले अरूको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ’ भनाइ ठिक छ । तर गराई ? अभिभावकबाट नानीहरूले संस्कार सिक्छन् । संस्कार अरूले सिकाउने होइन । बालक अभिभावकसँग कुरा गर्न चाहन्छ । कुरा गर्न समय दिऔँ । ऊ मन फुकाएर बाबुआमासित कुरा गर्न चाहन्छ । साथमै रहेर पनि बाबुआमाले आफूलाई समय नदिएपछि बालबालिका निराश हुन्छन् ।
केटाकेटी ठानेर उनीहरूका अगाडि झुटो नबोलौँ । फोनमा कुरा गर्दा सत्य बोलौँ । घरमै भएको मान्छे ‘बिर्तामोड वा काठमाडौँ गएको छु’ नभनौँ । खराब लत छ भने भरसक त्यागौँ । सकिँदैन भने उनीहरूका अगाडि त्यस्तो लत नदेखाऔँ । अर्थात् चुरोट, खैनी, पराग, रक्सी आदि खाने बानी छ भने यथाशक्य बालबालिकाको अगाडि प्रयोग नगरौँ । उसको सम्मानमा ठोस नर्पुयाऔँ । बालक भए पनि उसको आत्मसम्मान हुन्छ । ‘केटाकेटीलाई किन चाहियो ?’ नभनौँ । उनीहरू जिज्ञासु हुन्छन् । प्रत्येक जिज्ञासाको सकारात्मक समाधान दिने प्रयास गरौँ । विकसित राष्ट्रमा बालकलाई ‘नगर’ भन्नु हुन्न रे । त्यो नकारात्मक भयो । सकारात्मक सिकाऔँ । उदाहरणका लागि बालक कतै जान लाग्यो । हामी भन्छौँ — त्यता नजा वा त्यता नजाऊ । यसैलाई सकारात्मक बनाउँदा कतै जान लागेको बालकलाई यता आऊ भनेर आफूतर्फ आकर्षित गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्छ रे । विज्ञका कुरा । अभिभावकले बुझ्नुपर्ने ।
हामी कक्षामा हल्ला नगर भन्छौँ । हल्ला नगर्ने वातावरण बनाइ दिँदैनौँ । कक्षामा नाच्न लगाऔँ, नाच्छ । गाउन लगाऔँ, गाउँछ । चुट्किला सुनाऔँ, हाँस्छ । कथा सुनाऔँ, ध्यान दिएर सुन्छ । उसको आफ्नो बारेमा बोल्न लगाऔँ, बोल्छ । परिवार, छरछिमेक, नातागोता, आमाबाबाको बारेमा भन्न लगाऔँ, भन्छ । अनि आफूतर्फ आकर्षित गरेर पढाइ सुरु गराँै, मान्छ । हल्ला गर्दैन ।
पढाइलाई समूहमा गराऔँ । सबैलाई व्यस्त राख्ने प्रयत्न गरौँ । एकपछि अर्कोको पालो आउँछ र आफूले अरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हेक्का जगाऔँ । अर्काको सम्मान गर्ने बानी बसालौँ । नानीहरूलाई तपाईं भनेर सम्बोधन गर्नेबित्तिकै आधा समस्या समाधान हुन्छ । विषयवस्तुलाई रोचक बनाएपछि शतप्रतिशत समाधान हुन्छ । विधिका कुरा छन् । प्रविधिका कुरा छन् । अहिले अमेरिकाको विधि नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यताको प्रविधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । केवल सिर्जनशील बन्न आवश्यक छ । कसरी हुन्छ, कक्षालाई रमाइलो बनाउने प्रयत्न गरौँ । बालकहरू सामाजिक हुन्छन् । तिनको सामाजिकता र बाल्यकाल ध्वस्त नपारौँ । तर इनारमा फसेको मान्छे निकाल्न इनारमै पस्नु आवश्यक छ । यस कुरालाई मनन गरौँ । हामी ३५-४० वर्षका मानिसले नेताको राजनीतिक भाषण सुने जस्तो ४-५ वर्षको बालकबाट अपेक्षा नगरौँ । शिक्षकले मनन गर्ने कुरा ।
बालबालिका गैरजिम्मेवार बन्दै छन् । व्यक्तिवादी बन्दै छन् । अनैतिक बन्दै छन् । चरित्रहीन बन्दै छन् । हामी भन्छौँ, प्रविधिले बिर्गायो । सञ्चारले बिर्गायो । उसको हातमा प्रविधि कसले राखिदियो ? प्रविधिले कहिल्यै मान्छे बिगार्दैन । त्यसको दुरुपयोगले मानिस कुलतमा फस्छ । कुलतले उसलाई बिगार्छ । गाँजा, भाङ र रक्सी मात्रै कुलत होइनन् । मोबाइल, गेम, फेसबुक र युट्युब पनि कुलत बन्न सक्छन् । हाम्रा नानीलाई मोबाइल गेममा अभ्यस्त कसले बनायो ? हिजो हामीले नै होइन ? हो नि । आफूलाई झिँजो नगरोस् भनेर गेम खोलेर हामीले त छाडिदिएका हौँ नि । टिभी खोलिदिएर घरमै थुनी हामी बाहिर पनि त गएका हौँ । त्यति मात्र कहाँ हो र, होमवर्क र्ग भनेर उसलाई थर्काउँदै आफूले टिभी खोलेर पनि त हेरेका हौँ । अनि फोन आउँदा उसैलाई फोन उठाउन लगाएर ममी वा बाबा घरमा हुनुहुन्न भन्न लगाएको कसले नि ? त्यो संस्कार हो कि होइन ? पहिलो र महत्वपूर्ण संस्कार त्यही हो — सत्य र असत्यको । संस्कारको बीऊ ।
बीऊ नरोपी बोट उम्रँदैन । बोट नउम्री फल लाग्दैन । हाम्रा नानीहरूमा नकारात्मकताको बीऊ कसले रोपिदियो ? अनि कसले मलजल र्गयो र फैलँदै छ नकारात्मकता ? अरूका बालबच्चा बिगार्ने ठेकेदारहरू छन् भने अर्कै कुरा, नत्र एकछिन हामी अभिभावक र शिक्षकले गम्भीर भएर सोचौँ । आफलाई साक्षी राखेर सोधौँ, बालकको भविष्य निर्माणमा हामीले कति सही गरेका छौँ । र, कति गलत ? गलत छन् भने आजैदेखि सुधारौँ । सही छन् भने अरूलाई पनि सिकाऔँ । मेरो भनाइ यत्ति हो, बालक आफैँ बिग्रँदैन ।
(लेखक कर्णाली एजुकेसन फाउन्डेसन बुद्धशान्तिका प्राचार्य हुन् ।)